Rasaasa News – UBO iyo SNM oo London ku Shiray shalay!
UBO iyo SNM oo London ku Shiray shalay!
on January 30, 2012 1:06 pm
Olole iyo isgaashaanbuuraysi meherad la,aan ah oo lid ku ah dalka iyo dawlada Ethiopia, oo ay wadaan kooxo cadhaysan oo wata warmo kala jeeda ayaa ka socda dalalka galbeedka.
Waxaa shalay magaalada London ka dhacay shir kulmiyey labo kooxood oo aan xan mooyee hore xidhiidh fagaare loogu arag. Dadka ka qayb galay shirka ayaa kala taageersan UBO iyo SNM, kulanka ayaa ku magacownaa Qadyada Ogaden oo ka dhacay London 19/1/2012. Waa wax lagu qoslo!
Wariyaha shirka noo joogay Xuseen, ayaa noo sheegay in dadka ugu badan ee shirka joogay ay ahaayeen Jaaliyada maamulka Somaliland ee dalka Ingriiska. Masuuliyiinta Jaaliyada Somaliland ayaa fadhiyey shirkii saacadihii ugu horeeyey, in kasta oo ay kolkii dambe ka tageen hoolka shirka.
Waxaa iyana aad uga dhex muuqay shirka Jaaliyada beesha Mareexaan. Waxaa wax lala yaabo ahayd in Jaaliyada Ogaden ee magaceeda lagu qabtay shirka ay aad ugu yarayd shirka.
Wariye Xuseen ayaa noo sheegay in uu kula kulmay banaanka hoolka shirka wakiilka maamulka Somaliland u jooga dalka Ingriiska mudane Axmed Cumar Sangoore. Xuseen ayaa sheegay in uu ka dareemayey Sangoore la socodka shirka.
Xidhiidhka u dhaxeeya UBO iyo SNM maamulka Somaliland ayaa ahaan jiray mid ku kala duwanaa dareenka siyaasada ku aadan geeska Afrika. Khilaaf siyaasadeed ayaa hore uga dhex jiray labada koox, in kasta oo la sheego in xidhiidh qarsoon u dhaxayn jiray.
Xidhiidhkan aan qarsoodiga ahayn ee u dhaxeeya UBO iyo SNM, waxaa loo malaynayaa in uu saldhig u yahay xidhiidhka sii xumaanaya ee Ethiopia iyo maamulka Somaliland. Isu soo dhawaanshaha UBO iyo SNM, ayaan la filayn in xiligan oo wax macno ah ku soo kordhin karo siyaasada geeska Afrika.
Doorashadii Madaxweyne Siiraanye iyo heshiiskii nabadeed ee ONLF, ayaa soo shaac bixiyay waxyaabo badan oo hore uga qarsoonaa Ethiopia, kuwaas oo saldhig u ahaa hurinta colaadii ka jiri jirtay gabalka Ogaden.
Dad yar oo beesha Jwxo-shiil ah iyo todoba xubnood oo kooxdiisa ah oo u nasab sheegta beesha Ogadeen oo shirka joogay ayaan wax su,aal ah waydiinin Jwxo-shiil, balse yaxyaxsanaa.
Xidhiidhka UBO iyo SNM, ayaan waxba ka badali karin jihada siyaasada cusub ee geeska Afrika, maadaama ay dadweynaha Somalida Ethiopia si wanaagsan uga dharagsan yihiin qaswadayaasha qaribay danaha dadweynha.